Imigca ejikelezayo evela kwiipolines (Inyathelo 2) -I-Geofumed
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Imisele ezivela polylines (Inyathelo 2)
Kwithuba langaphambili sasine georeferenced umfanekiso oqulethe imida, ngoku sifuna ukuguqula umgca ye-Civil 3D.
Cinga i curves
Kuba kukho iiprogram eziphantse zizenzele inkqubo, njengaye AutoDesk I-Raster Designlingana Ukwahlukana eBentley okanye ArcScan e-ESRI. Kule meko ndiza kuyenza ngeenyawo, ndizobe iipolylines.
Akufanele kwenziwe kunye ii-smartlines, kodwa nge-polyline evamile.
Kuyacetyiswa ukuba kwenziwe amanqanaba anamagama eejika eziphambili. Uncedo lwezinto ezibonakalayo.
Kukhethwa ukuba usebenze kunye nemigca ye-0.30 ukuze ukwazi ukubona i nkqubela.
Ukubona ubungakanani bomgca, iqhosha le-LWT kufuneka liqaliswe.
Hlola kwaye udibanise iirveve.
Oku akusoloko kuyimfuneko, kodwa ngeenjongo zemfundo, masibone ukuba yenziwa njani. Kuyenzeka ukuba ezinye iipolylines zingenakudityaniswa ngenxa yokuba umyalelo uphazanyisiwe, okanye senze ezinye iiventi kancinci zobuhlanga ezingaziphathiyo ngejika.
Ukuhlela umyalelo we-polyline kusebenze ukuhamba
Unyulo oluninzi lukhethiweyo, ngeleta M kwaye emva koko ukungena
Zonke iipollines ezithemba ukuba zonyango zikhethiweyo
Sisebenzisa J ukujoyina
Sisebenzisa i-S ukuthobisa
Nika ukuphakama kwiipollines
Kuya kufuneka uchukumise amagophe, nganye nganye, usebenze iipropathi kwaye unike ukuphakama okuhambelanayo. Kule meko, kuba ziisentimitha ezingama-25 zonke, igophe eliluhlaza lingangama-322, kwaye kulandelayo ukufikelela eluhlaza okwakubomvu kuya kuba yi322.25, 322.50, 322.75
Kwimeko yezasezulwini, jonga ukuba iikhrayitheriya zisetyenziselwa ukwazi indlela yokuziphatha kwaloo ndawo. Ngesi sizathu, eziphambili kufuneka zibekwe kumbala owahlukileyo.
Unokuqinisekisa ukuba bonke bashiywe ngokuphakama, bebona umbono we-isometric.
Jonga> Iimbono ze-3D> NE Isometric.
Ukuguqula iipolinili ukuya kwii-curve zamanqanaba.
Ukwenza oku, siya kwipaneli ekhohlo, kwithebhu Prospector, kwaye sakha indawo entsha, yohlobo TIN.
Apha, xa kuphezu komhlaba, ungabona iipropati, phakathi kwazo ezibonakalayo Masks, Water Watersheds, kwaye Izicatshulwa. Kulapho iikhrayitheriya zemigca yentsontelo ivela khonaIintambo).
Iqhosha lasekunene lenziwe Iintambo, ngoko Yongeza.
Kulo nkcazo siza kubeka iifowuni, size senze ok. Emva koko sikhetha zonke iipolylines esizigcinileyo.
Jonga ukuba uvela phi, i-triangulation yenziwe.
Lungisa iipropati zee curves.
Enye inkcukacha ihlala ibangela ukuphelelwa lithemba xa kusenziwa okokuqala. Kwaye kunjalo, ukuba imigca ejikelezayo ibonakala ingabonakali, kodwa ngumba we izakhiwo zokuthunyelwa.
Kule nto, yenziwe iqhosha elifanelekileyo lemouse kwaye sikhetha Hlela isitala somhlaba. Kule paneli, sikhetha isithuba Iintambo. Kwi Iintlanganiso eziPhakathi, sakhetha ikhefu elifanayo njengemephu echongiweyo, ukujonga ukuba yonke into ihamba kakuhle.
Iindonga eziphambili kwi-1.00 nganye kunye neekondlo zesekondari kwi-0.25 nganye.
Kwaye nantso ke. Kucacile ukuba okugabadeleyo kukho unyango ekufuneka lwenziwe, kuba inkqubo izama ukuvala umda ucinga ukuba akukho kuqhubeka kwelinye iphepha. Siza kubona ukuba kwesinye isithuba siyithelekisa neGoogle Earth yedatha kwaye sikhuthaze indawo yabakhenkethi yokuya kubahlobo Iipilisi.
Mna ezintsha kweli civil3d yaye ingxaki kuba ndafumana aya komnye ifomati yefayile DWG okanye ifomathi endala AutoCAD apho asikwazi ukusebenza ngaphakathi 3d yoluntu Ndithanda ukwazi amanyathelo ukuguqula le fayile uguqulelo civil3d ukuze sikwazi ukusebenza ngokungathi imigca aya ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa ifayile converter ngiyabonga kusengaphambili autodesk yangoku ngakumbi.
Ewe, xa uninzi ukukhangela, i-Raster Design uncedo olukhulu.
NGAPHELA ISIKHOKELO SOKUBHALISA IMIQUBO YENQUBO, KANYE NDAKUTHUTHUKISA UMSEBENZI WAM NOKUBA NDAKHONA UKUQALA